Frequently asked questions about Alert Level 4 (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions about Alert Level 4 (isiXhosa)
Yintoni i- Alert Level 4?
I –Alert Level 4 linqanam elibekiweyo lokucuthwa kwentshukumo kuzwelonke ngelixesha leMeko yeNtlekele elifuna wonke ummi wase Mzantsi Afrika ukuba ahlale ekhaya ukukhusela ukunwenwa kweCovid-19 ngaphandle kokuba:
Wenza umsebenzi ongundoqo okanye iinkonzo ezivumelekileyo
Uya emsebenzini apho ipemithi, ebhalwe kwifom enikiweyo,uyinikiwe ngumqeshi wakho
Uthenga izinto iimpahla ezivumelekileyo
Uyokufuna iinkonzo ezivumelekileyo (ezifana nokuya kufumana imali yesibonelelo sika rhulumente / yoncedo loluntu okanye uyakufuna uncedo kwezempilo okanye iinkonzo zoncedo lwezilwanyana i vetenary) •Uhambisa abantwana ngokuvumelekileyo
Uyahamba hamba wenza imithambo uyazilolonga, uyabaleka okanye usebenzisa ibhayisikile phakathi kweeyure 06h00 no 09h00 ekuseni, kwikhilomitha ezingumgama oyi 5 khilomitha yendawo ohlala kuyo (oku makungenziwa ngokwamaqela abantu)
Ngelixesha le Alert Level 4 kukho umnqophiso obekiweyo wokuba abantu mabahlale ngezindlu ukusukela kwintsimbi yesibhozo ngokuhlwa u - 20h00 ukuya kwintsimbi yesihlanu u- 05h00 ekuseni yonke imihla, yaye kufuneka uhlale ekhaya, ngaphandle kokuba unikwe ipemithi ekuvumela ukuba wenze imisebenzi engundoqo okanye iinkonzo ezivumelekileyo okanye wenza umsebenzi ongxamisekileyo wezokhuselo okanye ezempilo.
Jonga iinkcukacha apha ngezantsi ngezinto ezikhethekileyo ezikuvumela ukuba ushiye ikhaya lakho ngelixesha le Alert Level 4.
Iyakuhlala ixesha elingakanani i-Alert Level 4?
Ukumiswa ngxi kweentshukumo okupheleleyo kuzwelonke (Alert Level 5) iqale ezinzulwini zobusuku ngomhla w e- 30 ku Epreli. Siku Alert Level 4 wokucuthwa kweentshukumo ngoku, eqale ngomhla we-1 kuMeyi yaye sakuhlala ngonyanzeleko side sichazelwe ngentetho eyakuthi yazise ngamanqanaba ohlukeneyo ngelixesha lentlekele kuzwelonke.
Iyakuphela nini i- Alert level 4?
Okwangoku, asikayazi. Urhulumente ka Zwelonke uyakuqhuba ngokubeka esweni imeko kwakunye nezinga losuleleko lweCovid-19 ukuze amisele eyona ndlela anoyithatha ukunqanda ukunwenwa kwe Covid-19. Iinkcukacha ezithe vetshe zawukwaziswa xa sele kukho inkqubo eyenziweyo kulemeko.
Ndingalishiya nini ikhaya lam ngelixesha le- Alert Level 4?
Ngelixesha le Alert Level 4 ungakwazi ukushiya ikhaya lakho ukuya kuthenga iimpahla/izinto ezivumelekileyo okanye ukuya kufumana iinkonzo ezivumelekileyo, eziquka umzekelo ukuthenga ukutya, ukufumana uncedo kwezempilo, ukuya ekhemisti, ukuya kufuna iinkonzo zasebhankini, ukuya kutha amafutha esithuthi kwakunye nokuya kupeya imali yesibonelelo sika rhulumente i- granti.
Qaphela ukuba akunyanzelekanga ukuba ugcwalise iifomu ukuze ushiye ikhaya lakho usiya kuthenga ukutya, okanye usiya kufumana iinkonzo ezivumelekileyo.
Ngabo bashiya amakhaya abo besiya emsebenzini kuphela ekufuneka befumene iimpepha zemvume-i-pemithi kubaqeshi babo eziqinisekisa ukuba benza umsebenzi ophambili ongundoqo.
Kufuneka ufake i maskhi yelaphu okanye eyenziweyo ethi yogquma impumlo nomlomo xa usendaweni enabantu abaninzi, okanye nayiphi na into elilaphu elungileyo elilaphu ethi igqume impumlo nomlomo.
Awuvumelekanga ukuba usebenzise naluphi na uhlobo lwesithuthi sikawonke wonke, okanye ungene kwisakhiwo okanye indawo okanye iziko ukuba awufakanga maskhi okanye nayiphi imaskhi eyenziwe ngelaphu elivumelekileyo ethi igqume umlomo nempumlo.
Ungakwazi ukuya esifihlweni, kodwa kufuneka kubekho abantu abangagqithanga ku - 50 kwisifihlo eso, ayivumelekanga imilindo nemilaliso yaye kufuneka kugcinwe ucoceko kunye nomgama ophakathi kwabantu kufuneka ulandelwe ukunqanda ukunwennwa kweCovid-19.
Ngelixesha le Alert level 4 AWUNAKUKWAZI ukwenza oku:
• Ukuya kwamanye amaphondo
• Ukuhamba hamba phakathi kwe siXeko saseKapa kwingingqi yemetro nakwisiThili esikwindawo eziseNtshona Koloni
• Ukushiya uMzantsi Afrika.
Kwakuvunyelwa uhambo kuphela phakathi kwamaphondo naphakathi kwemetro nezithili ukuba:
•Ungumsebenzi onepemithi yokwenza imisebenzi engundoqo okanye imisebenzi evumelekileyo yaye kufuneka uhambe uye emsebezini uphinde ubuye yonke imihla
• Uhambisa umzimba womntu oswelekileyo ngesithuthi
• Uya esifihlweni, njengoko kuvumelekile
• Umfundi ekufuneka aye esikolweni aphinde abuye okanye uya kumaziko emfundo aphezulu yonke imihla ngexesha ekuthe kwavunyelwa ukuba amaziko emfundo avulwe kufundwe
• Ukuhanjiswa kwemithwalo emikhulu neempahla kwalapha kwiRiphablikhi kuthuthwa iimpahla ezingundoqo ezifika kweli, ukufika kwezixhobo nezinto ezizntsimbi ezincinci ezifunwayo kuzakwenziwa izinto ezivumelekileyo phantsi kwe Alert level 4, imithwalo efika kumanxweme okungena kweli, iimpahla eyothulwa kumanxweme eli ukuze kuhanjiswe imithwalo kuwamazwe angabamelwane kwalapha kwi Riphablikhi, nemithwalo evumelekileyo ukuba iphume kweli, neempahla eziya kwalapha kwi Riphablikhi Kwakhona.
Ukuba awukho endaweni ohlala kuyo ikhaya lakho, okanye umsebenzi phambi kokumiswa ngxi kweentshukumo, ungakwazi ukuhamba kanye kuphela, uphindele endaweni ohlala kuyo okanye osebenza kuyo, yaye kuyakufuneka uhlale apho kude kuphele ixesha le- Alert level 4. Abantu abafuna ukusebenzisa elixesha lokuhamba hamba kanye bangakwenza oko ngelixesha ukusukela ngomhla we - 1 kuMeyi 2020 ukuya kumhla we - 7 kuMeyi, yaye akufuneki ubene pemithi ukuze ukwazi ukuya kwamanye amaphondo, kwimetro okanye kwizithili.
Ungakwazi ukuba, kwesisithuba sinye, utshintshe indawo yokuhlala uthuthe nempahla yakho yendlu oku ungakwenza kwisithuba esiqala kumhla we 7 Meyi 2020 ukuya kumhla we 7 June 2020. Oku kubhekisa nakwaba basayine ikhontrakhthi yendawo yokuhlala phambi okanye ngexesha lokumiswa ngxi kweentshukumo okanye abo benze itransfere zezindlu phambi okanye ngexesha lokumiswa ngxi kweentshukumo. Qaphela ukuba kufuneka ubenayo i pemithi oyifumene kumpathi sitishi samapolisa okanye lowo obekiweyo ukuba ahambe kumaphondo, kwimetro okanye kwizithili. Ukufumana ipemithi kwakufuneka uchaze amagama abantu abazakungena/fudukela endlini yaye unike nesivumelawano esihambelana noko nesichaza umhla wokuphelelwa kwesivumelwano esidala nomhla wokuqala kwesitsha, okanye amaxwebhu okutransferwa kwendlu anobungqina bolutshintsho lomntu omtsha ozakuhlala abengumnini ndlu omtsha.
Kuyakwenzeka ntoni xa ndingayithobeliyo imithetho ye- Alert level 4?
Nabani na owophula imithethetho ye-Alert level 4 ngokwenza iindibano, okanye othintela, nongenelela ngoku okanye othintela igosa lonyanzeliso lomthetho, okanye ongathobeliyo umthetho wokucuthwa ekuhamba hambeni kunye nokuvalwa, okanye ukungathobeli ukunqandwa kulowo ukhutshwayo, ukuthenga, ukukhupha kunye nokuhambisa utywala kunye nokuthengisa icuba lokutshaya, isigarethi zomoya kwakunye nayiphi na into ehambelana nazo, kunye nevenkile zempahla ezithengisa iimpahla ezingavunyelwanga kuthengiswa, bayakufunyaniswa benetyala bagwetywe, babenetyala bohlwaywe okanye bavalelwe eziseleni kangengenyanga ezingadlulanga kwezintandathu okanye zozibini ezizohlwayo nesokuvalelwa eziseleni.
Ndingala ukuvavanyelwa i- Covid-19, okanye ukubekwa bucala okanye ukuhlaliswa ndodwa?
Ukuba ukhe wavavanyelwa i Covid-19 wafunyaniswa unayo, okanye ukuluhlu lwabo baseklinikhi okanye elabhoratri abafunyaniswe bosulelekile, okanye uyakrokrelwa ukuba wosulelekile yi Covid-19, okanye ukhe wadibana nomntu owosulelwe yi Covid-19, awunako ukwala uku:
ukuba unikezele uvavanywe ngokwasempilweni, okanye kuthathwe isampulu iyovavanywa ngabo bagunyaziswe ngumthetho ukuba benze njalo
ukuba uyekungeniswa kwindawo eliziko lezempilo okanye uhlaliswe wedwa okanye kwindawo yokuzivalela ubewedwa
okanye ungenise i-prophlaxis enyanzelekileyo, unyango, ukuhlaliswe wedwa, ukuze ubenako ukukhusela unikezelwano
Ukuba awuthobeli umthetho okanye imiyalelo yegosa lonyanzeliso lomthetho, uyakubekwa kwindawo yakho wedwa okanye uhlaliswe wedwa kangangexesha elingadlulanga kwiiyure eziyi 48, kuxhomekeka kwisiqinisekiso somthetho ukuba sikhutshwe yiNkundla enolwazi, ngesicelo esifakwe ligosa lonyanzeliso lomthetho ukuze kujongwe uvavanyo lwezempilo.
Ndingasifaka phi isikhalazo ndikhalazela abonyanzeliso lomthetho?
Ezikhalazela aMapolisa singafakwa ku Western Cape Police Ombudsman (WCPO) ukuba sibhekiselele ekungawenzeni kakuhle umsebenzi kwamapolisa:
ungabhalelela kule -Email: ombudsman@wcpo.gov.za
okanye ungafaka isikahalazo sakho apha ku www.westerncape.gov.za/police-ombudsman
Izikhalazo zamaJoni u- SANDF zingafakwa apha ku- Military Ombudsman:
Umnxeba: 012 676 3800
INombolo yamahala: 080 726 6283
ezikhalazela amaPolisa okanye u- Cape Town Metro Police ezibhekiselele ekungaziphathini kakuhle zingafakwa apha ku- Independent Police Investigative Directorate (IPID):
Ukuba ndibona umntu ongawuthobeliyo umthetho wokucuthwa kweentshukumo we-Alert level 4 ndingaxela kubani?
Ungatsala umnxeba kulenombolo 10111 okanye utsalele amapolisa okanye abonyanzeliso lomthetho abakufutshane nawe uxele nantoni ebonakala ingathobeli imithetho ye - Alert level 4
Ndinamashishini endiwaziyo athengisa izinto ezibalulekileyo ngamaxabiso abaxileyo - ndingakuxela kubani oku?
Abathengi bangakuxela ukunyuka ngokubaxekileyo kwamaxabiso ezinto ezibalulekileyo kunye nezinye iimveliso eziphambili kwiKhomishini yaBathengi kaZwelonke kumnxeba wayo wasimahla ongu: 0800-014-880.
Zeziphi iimpahala ezizakufumaneka ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo?
Jonga uluhlu leempahla ezivumelekileyo neziyakubakho onokukwazi ukuzithenga ngelixesha le Alert Level 4
Iinkonzo ezingxamisekileyo ziquka oogqirha, iklinikhi, izibhedlele kunye nekhemisti ziza kusoloko zivuliwe njengesiqhelo.
Ngubani onokwazi ukusebenza?
Bonke abo imisebnzi yabo ikukunika iinkonzo ezingundoqo okanye iinkonzo ezivunyelweyo bayakuvunyelwa ukuba baye emisebenzini.
Nawe ungasebenza ukuba ishishini lakho livunyelwe ukuba lisebenze ngelixesha le- Alert level 4.
Umqeshi wakho kufuneka akunike ipemithi, ebhaliweyo, kwi fom elungiselwe oko, ukuze ukwazi ukushiya ikhaya lakho uye emsebenzini. Ukuba awenzi msebenzi ungundoqo okanye iinkonzo ezivunyelweyo, kufuneka uhlale ekhaya.
Jonga uluhlu lweenkonzo ezingundoqo, iinkonzo ezivunyelweyo kunye namashishini avunyelweyo ukuba asebenze ngelixesha le-Alert level 4.
Ndingakuthenga njani ukutya ezivenkileni ngokukhuselekileyo?
Xa usezivenkileni zokuthenga ukutya, gcina umgama ongange 1.5 yemitha kwabanye abantu yaye unqande ukuziphatha emehlweni, emlonyeni nasempumlweni. Ukuba unako, sanithayiza imiqheba yetroli okanye ibhaskithi yevenkile phambi kokuba uyibambe xa uzakuthenga. Xa ufika ekhaya hlamba izandla zakho kangangoko nasemva kokukhupha nokupakisha iimpahla ezithengwe evenkileni.
Ndingasisebenzisa isithuthi sikawonke- wonke ngelixesha le - Alert Level 4?
Ewe, ungasisebenzisa isithuthi sikawonke wonke ngelixesha le-Alert level 4, kodwa kwenze oko ukuba ngenene kunyanzelekile.
Xa uhamba ngesithuthi sikawonke wonke KUNYANZELEKILE ukuba ufake i maskhi, okanye noba lilaphu elogquma impumlo, kunye nomlomo ngamaxesha onke.
Izithuthi zika wonke wonke zivumelekile ukuba zisebenze ukusuka ngentsimbi yesihlanu ekuseni - 05h00 ukuya kwintsimbi yesixhenxe malanga u- 19h00 yaye umqhubi kufuneka aqinisekise ukuba ubeka umntu wokugqibela ngentsimbi yesixhenxe ngqo u- 19h00.
Bonke abaqhubi bezithuthi kufuneka baqinisekise ukuba izithuthi ziyasanithayizwa phambi kokukhwelisa abantu nasemva kokothula abakhweli. Kufuneka baqinisekise kwakhona ukuba amacango kunye nemiqheba yeefestile, iindawo zokuphumza ingqiniba kunye neendawo zokubambelela kwizithuthi zikawonke wonke ziyasanithayizwa emva kokothula iqela labantu ngalinye kwaye kufuneka bakhuthaze nabakhweli ukuba basanithayize izandla zabo xa bengena kwisithuthi nasemva kokuphuma kwisithuthi eso. Abanini ndawo (iirenki) bezithuthi zika wonke wonke kufuneka babenemithetho abayibekileyo emayithotyelwe kwithuba lokungasondelelani kwabantu ukucutha ukunwenwa kwalentsholongwane.
E-hailing, i-meter taxis, iinkonzo zothutho lwasezihotele kunye nezithuthi eziqashelwe ukuqhubela abantu i-chauffer azinakukhwelisa abantu abangaphezulu kwe 50% yenani labakhweli elivumelekileyo ngokomlinganiselo wesithuthi. Izithuthi eziziTaxi ezincinci neziphakathi azinakukhwelisa ngaphezu kwe 70% womyinge wenani labakhweli eliqhelekileyo. IIbhasi ezinkulu azinakukhwelisa ngaphezu kwe 50% yomyinge wenani labakhweli eliqhelekileyo. Izithuthi zabantwana besikolo azinakukhwelisa ngaphezu kwe 70% womyinge wenani labantwana eliqhelekileyo.
Ukuba wenza umsebenzi ongodoqo yaye awukwazi kuya emsebenzini, umqeshi wakho makenze amalungiselelo okuba ufumane isithuthi sokuya emsebenzini.
Nabani na ongumqashi onabantu abenza umsebenzi ongundoqo ofumana ingxaki yesithuthi sokubasa emsebenzini, bangaqhakamshelana neNtloko yeSebe lezoThutho kunye neMisebenzi yoLuntu kule imeyile HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za, achaze uhlobo lomceli mngeni analo ngokwesithuthi.
Nceda uchaze iinkcukacha ezicacileyo, kuquka inani labantu abafuna isithuthi, bezakusuka phi besiya phi, ngabani ixesha.
Ukuba uziva unempawu zomkhuhlane i fiva ezifana neze Covid-19, ezifana ne fiva okanye ukukhohlela, kubhetele ukuba uhlale ekhaya. Oku akuncedi wena kuphela, koko kunceda ukunqanada unganikezeli abanye abakhweli.
Kufuneka ndenze ntoni ukuze ndikwazi ukuya esifihlweni?
Ungakwazi ukuya esifihlweni, kodwa kufuneka bangagqithi kwinani elingu - 50 abantu kwesosifihlo, imilindo nemilaliso ayivumelekanga, makulandelwe yonke imithetho yezococeko ukuze kunqandwe ukunwenwa kwe Covid-19.
Uyakuvunyelwa ukuba uhambe uye kwamanye amaphondo, imetro okanye isiThili ukuya esifihlweni ukuba ungu:
mlingane okanye iqabane lalowo uswelekileyo;
ungumntwana walowo uswelekileyo, okuzalayo, omkhulisileyo okanye akazalwa nguwe;
umntwana wasebukhweni bomfi;
abazali bomfi begazi, abamkhulisileyo okanye ongazalwa ngabo;
umntu azalwa naye, noba bazalwa kunye, ukhule nabo okanye akazalwa nabo umfi
Umakhulu notamkhulu bomfi.
Umntu ngamnye, nokuba uhamba yedwa okanye nabanye abantu ofuna ukuya esifihlweni yaye ekufuneka uhambe phakathi kweziThili, okanye phakathi kwamaphondo ukuya esifihlweni kufuneka afune ipemithi, ebhalwe kwi fom ekulungeleyo oko. Ungayifumana lefom kwi ofisi kamantyi ekufutshane okanye kwisikhululo samapolisa.
Oku kwakunceda ukuba ubenako ukuya esifihlweni uphinde ubuye. Xa uyokwenza isicelo sepemithi kumantyi kufuneka uphathe isiqinisekiso sokufa –i death certificate okanye ikopi yesiqinisekiso sokufa efakwe isitampu emapoliseni kuMantyi oyena oyintloko ye-ofisi okanye umphathi sitishi kwisikhululo samapolisa okanye umntu lowo obekwe oko. Ukuba isiqinisekiso sokufa asikabikho yaye isifihlo kufuneka senziwe kwiyure ezingama 24 ngokugcina iinkolo zabantu abohlukenenyo, umntu lowo owenze isicelo sepemithi makenze isifungo esisiqinisekiso esibhaliweyo, kwifom elungiselelwe oko, ihamba kunye nencwadi evela kumkhokheli wenkolo ocacisa nongqina imfuneko yokuba kungcwatywe kwiyure eziyi 24.
Amalungu amabini osapho kuphela okanye nomntu omnye ohlobene nosapho lomfi angakwazi ukuthi, ngalepemithi ivumelekileyo, abekhona kwisithuthi esihambisa umzimba womfi ukuya kulondawo ikwimetro, okanye kwisithili, okanye kwelinye iphondo apho sakubanjelwa khona isifihlo, ukuba unobangela wokufa komfi ohanjisiwayo akunxulumananga ne Covid-19.
Ndingathutha iimpahla zendlu ngelixesha le-Alert level 4?
Ewe, ungathutha, kubekanye nje kuphela, ukutshintsha indawo kunye nokuthutha ifenishala yakho ngelixesha eliphakathi komhla we 7 May ukuya ku 7 Juni 2020.
Oku kuhambelana nabo bathe basayina isivumelwano sendlu okanye indawo yokuhlala phambi okanye ngexesha lokumiswa ngxi kweentshukumo okanye batrasfere izindlu ngelixesha linye. Qhaphela ukuba kufuneka ufumane ipemithi kumphathi sithishi kwisikhululo samapolisa okanye kumntu lowo obekwe nguye. Ukufumana ipemithi kwakufuneka uchaze amagama abantu abazakungena/fudukela endlini yaye unike nesivumelawano esihambelana noko nesichaza umhla wokuphelelwa kwesivumelwano esidala nomhla wokuqala kwesitsha, okanye amaxwebhu okutransferwa kwendlu anobungqina bolutshintsho lomntu omtsha ozakuhlala abengumnini ndlu omtsha.
Ndingakwazi ukuya kwiziko lika rhulumente ukuya kuvelela umntu ngelixesha le - Alert level 4?
Ngelixesha le - Alert level 4 onke amaziko ezempilo kwicala lokuvelela abantu azukuba evaliwe, yaye onke amalungiselo oqhaqho angangxamisekanga arhoxisiwe okanye acinyiwe.
Izigulani ezifuna uncedo olukhawulezileyo kwiinkonzo zokusindisa ubomi, iinkonzo zocwangciso-nzala kunye nezokhathalelo lwabakhulelweyo bangeza kumaziko abo kunye nabo banamadinga avunyiweyo aze aqinisekiswa.
Ukongeza, kusalindeleke uMkhomba-ndlela oyakuthi ukhutshwe nguMphathiswa woBambiswano kwezoLawulo kunye neMicimbi yaMasiko neZithethe, akuvumelekanga ukuba uluntu luhambele lamaziko alandelayo:
Amaziko oluleko lweZimilo
Amaziko obuyiselo lwamabanjwa entolongweni
Amaziko okuBamba amaJoni
Amaziko eSebe loPhuhliso oLuntu, kuquka Amaziko okuKhathalela abaNtwana noLutsha, iindawo zokugcina abantwana. Kwi- One Stop Centres, kunye namaZiko Onyango, zonke ezindawo nalamaziko zivaliwe zisemisiwe ngelixesha le -Alert Level 4 lokucuthwa kweentshukumo.
Njengabazali abaqhawule umtshato sincedisana ngokukhulisa (abantwana) bethu, sakuvumeleka ukuba sihamnbise abantwana phakathi kwamakhaya?
Imigaqo ye-Alert level 4 ivumela kuphela iintshukumo zabantwana phakathi kwamakhaya xa kufuneka kuncedisenwe ngoxanduva lokukhulisa abantwana kunye nelungelo lwabanakekeli babantwana, apho kuncediswana ngoxanduva lwabantwana/ ilungelo lwabanakekeli babantwana linako oku:
apho abanini boxanduva lokukhulisa abantwana benesivumelwano sesicwangciso sokukhulisa abantwana, esibhaliswe kwirejista yegqwetha losapho, elikhoyo; kunye
nepemiti ekhutshwe ngumantyi ehambelana neFom 3 yesiHlomelo A semigaqo ye COGTA.
Ukuhanjiswa kwabantwana phakathi kwamakhaya abazali abancedisana ngoxanduva lokukhulisa kunye namalungelo lwabanakekeli babantwana, njengoko ichaziwe kwicandelo 1(1) loMthetho waBantwana, 2005(UMthetho No. 38 ka 2005), phakathi kwemetro,izithili zikamasipala okanye amaphondo kuvumelekile ukuba bazali abanini abancedisana ngoxanduva kunye namalungelo abanakekeli babantwana linayo ipemithi ekhutshwe ngumantyi neFom 3 yesiHlomelo A.
Nawuphi na umntwana obengekho kwikhaya lakhe lomzali ahlala naye phambi kokumiswa ngxi kweentshukumo nongenako ukuhamba phakathi kwamaphondo, kwimetro, okanye kwizithili uyakuvunyelwa ukuba ahambe, oko kuyawukwenzeka kanye kuphela, ukuze abuyele kwikhaya lakhe apho ahlala khona ukuba abazali abancedisana ngoxanduva lokukhulisa kunye namalungelo abanakekeli babantwana banayo ipemithi ekhutshwe ngumantyi kwiFom 3 ehambelana nesiHlomelo A.
Ikhaya apho umntwana ayakuhlala khona, kufuneka libe licocekile alinayo iCovid-19.
Phambi kokuba uMantyi akhuphe ipemithi ngokubhekiselelele koku kungentla, kufuneka afumane oku:
isiqinisekiso sokuzalwa somntwana/ sabantwana okanye ikopi yaso efakwe isitampu sasemapoliseni esiqinisekisa ubunyani bokuba ngowakho/ ngabakho nokuqinisekisa ukuba niyancedisana ngoxanduva lokubakhulisa kwakunye namalungelo oko: kunye
nesizathu esibhaliweyo esichaza unongela nemfuneko yokuhambisa abantwana phakathi kwamakhaya amabini.
Phambi kokuba uMantyi akhuphe ipemiti ngokubhekiselele koku kufuneka oku:
umyalelo wenkundla i-court order
uxanduva lokukhulisa abantwana kunye namalungelo akwisivumelwano okanye isicwangciso esibhaliswe kwigqwetha losapho okanye isiqinisekiso sokuzalwa okanye ikopi efakwe isitampu sasemapoliseni esiqinisekisa ubunyani bokuba ngowakho/ ngabakho nokuqinisekisa ukuba niyancedisana ngoxanduva lokubakhulisa kwakunye namalungelo oko;
Ndingalishiya ikhaya lam ndihambise inja, okanye ndenze imithambo ukuzilolonga, efana nokubaleka kancinci okanye ngebhayisikile?
Ewe, ungalishiya ikhaya lakho uye kuhamba hamba, ubaleka okanye usebenzisa ibhayisikile ngelixesha le - Alert Level 4, kodwa ungakwenza oko ukusukela kwintsimbi yesithandathu 06h00 ekuseni ukuya kwintsimbi yethoba 09h00 yaye kufuneka ibe ngumgama ozikhilomitha ezintlanu 5 km nekhaya lakho.
Ndingabuthenga utywala ngelixesha leAlert level 4?
Utywala abuthengiswa okanye abuhanjiswa ukuze buthengiswe ngelixesha le-Alert level 4.
Ngaphandle kokuba utywala bufuneka kwiindawo zokwenza isanithayiza izitshutshuzi zokususa iintsholongwane, isephu, utywala obusetyenziswa ukwenza izicoci zendlu, okanye apho utywala buthengiswa okanye buhanjiselwa iinjongo ezinjalo.
Ndingazithenga i sigarethi ngelixesha leAlert level 4?
Hayi, awunako ukuthenga isigarethi ngelixesha le- Alert level 4.